I-AfricArXiv-IPan-African Open Access portal
I-pan-African portal yokungena ngokuvulekileyo
I-AfricArXiv yindawo yokugcina ekhokelwa luluntu ekhokelela kulwakhiwo lwamagcisa aphangaleleyo aphethwe ngabantu baseAfrika; a ulwazi oluqhelekileyo Yomphengululi wase-Afrika usebenza ukukhuthaza Ukuhlaziywa kweAfrika. Sisebenzisana noovimba beenkonzo ezinikezelweyo ukuze sinikezele ngeqonga kwizazinzulu zaseAfrika zalo naluphi na uqeqesho lokunikezela ngeziphumo zophando lwazo nokunxibelelana nabanye abaphandi kwilizwekazi laseAfrika nakwihlabathi jikelele.
Gcina isihlalo sakho kwiseshoni yophando engezantsi kunye neqela lethu okanye unxibelelane nathi ku info@africarxiv.org.
Jonga ukungeniswa okwamkelweyo kwezi ndawo zilandelayo:
Ngenisa owakho umsebenzi
Ungangenisa imibhalo ebhaliweyo eprintiweyo, eprintwe emva, inkcazo-ntetho, iiseti zedatha, kunye nezinye iifom zeziphumo zophando ngayo nayiphi na indawo yokugcina amaqabane ethu. Fumanisa ukuba ungayenza njani ulwazi.africarxiv.org/submit/.
Sikhuthaza ukufunyanwa kwesiphumo sophando lwase-Afrika ngokusebenza ngokungqinelana nale mithetho-siseko nemibutho elandelayo:
Imigaqo yokuKhathalela uLawulo lweNgcaciso yeMveli
Isibhengezo saseSan Francisco ngoVavanyo loPhando
Inyathelo leHelsinki kwiLwimi eziNinzi kuNxibelelwano lwaBafundi
Isakhelo soLuntu se-COAR seZenzo eziLungileyo kwiiRekhodi
>> Funda ngaphezulu malunga neAfriArXiv.
Ukufunda kwakhona okukhawulezayo: indlela eqale ngayo https://t.co/KOUOhq7sYd
Siphehlelele iAfricArXiv ngeyeSilimela yowama-2018 sicinga ngemo yendawo yokugcina izinto eAfrika pic.twitter.com/cogcBck5ux
-I -AfriArXiv (@AfricArxiv) Februwari 20, 2020
Yabelana ngophando lwakho kwiilwimi zase-Afrika
Yenza iziphumo zakho zikhangeleke kwaye usebenzise ilayisensi ye-CC-BY
Khuthaza Vula iScholarship, uMthombo oVulekileyo kunye neMigangatho evulekileyo
Iindaba malunga nokuFumaneka okuvulekileyo e-Afrika
Fumanisa ngakumbi uphando lwase-Afrika
Indawo yokuqala ye-AfricArXiv kwi-OSF
Imibhalo-ngqangi yangaphambili epapashiwe kwiAfrikaArXiv ngeNkqubo yeSayensi evulekileyo (i-OSF).
IiRekhodi zoPhando zoDijithali
Uluhlu lwezinto ezigcina iimpahla kwilizwekazi laseAfrika.
Iijenali zase-Afrika ezikwi-Intanethi
Ithala lencwadi elikwi-Intanethi elihlolwe ngokutsha koontanga, Iijenali ezipapashiweyo zaseAfrika.
Uphando oluvulekileyo lwe-AAS
Iqonga lokushicilela ngokukhawuleza kunye nokuvavanywa kontanga okuvulekileyo kubaphandi.
'Afrika' Imephu yoLwazi oluVulekileyo
Iziphumo zophendlo ezingumxholo ezisekwe kwimethadatha kunye namagama aphambili kunye ne-'Afrika '.
Iziphumo ze-BASE ezithile e-Afrika
Injini yokukhangela enganyanzelekanga ngakumbi kwizibonelelo zewebhu zemfundo.